जाडो मौसममा कस्तो खाना खानु राम्रो हुन्छ ? « Sansar News
जाडो मौसममा कस्तो खाना खानु राम्रो हुन्छ ?
२५ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०९:०६
सन्सारन्युज । जाडो समय शुरु भैसकेको छ । जाडो समयमा मानिसलाई तुलनात्मक रुपमा बढि मात्रामा क्यालोरीको आवश्यकता पर्दछ । जाडो समयमा गर्मीको तुलनामा खानाको रुची पनि बढी हुने गरेको पाइन्छ । तर जाडो समयमा कस्तो खाना खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ ?
आयुर्वेद विज्ञानले जाडो मौसममा शरिरलाई बढी मात्रामा शक्ती चाहिने र त्यसको लागि बढि क्यालोरीयुक्त खाना खान सकिने बताउँछ । शरिरले बढी क्यालोरीको खपत गर्ने भएकाले चिल्लो पदार्थ पाईने खानलाई जाडो मौसममा थप्न सकिन्छ । शरिरलाई तातो कायम राख्न, शरिरलामा रोग संग लड्ने क्षमता कायम राख्न र शरिरमा पोषक तत्वको कमि हुन नदिन सन्तुलित भोजनको व्यवस्थापन गर्न आयुर्वेद विज्ञानले सझाएको छ ।
जाडोको सुरुदेखि नै मकै, गहुँ, केराउ, आलस, आदिबाट तयार गरिएका विभिन्न प्रकारका परिकारहरू खानु राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि, दलिया, रोटी वा डोसा। तिनीहरूबाट तयार पारिएको परिकारले तौल नियन्त्रण गर्न र शरीरलाई न्यानो राख्न मद्दत गर्छ। तर यी परिकारहरुमा घिउको कम प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
जाडो मौसममा धेरै प्रकारका सागसब्जहरुको उपलब्ध हुने गर्छ । मरिचको प्रयोग गरेर सबै प्रकारका हरिया सागसब्जीको सुप खानाले शरिरमा उचित मात्रामा तापक्रम कायम राख्न मद्दत गर्दछ । साथै यसरी सुप खाँदा शरिरको रोग संग लड्ने क्षमताको विकास गर्नुको साथै शरिरमा एन्टिअक्सीडेन्टको मात्रा पनि बढाउँदछ ।
यो मौसममा मेथी, तोरी, बेथे, आदि जस्ता हरियो सागसब्जी उत्पादन हुन्छ । यिनीहरुमा भिटामिन ए, ई, के, फोलिक एसिड, आइरन, पोटासियम र क्याल्सियम जस्ता पोषक तत्वहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। बिहान वा बेलुकाको खानामा यि सागसब्जीलाई समाबेश गर्नाले शरिरको तौललाई सन्तुलनमा राख्नुका साथै रुघाखोकी लाग्नबाट बचाउँछ ।
तिल, बदाम र गुड (उखुको परिकार) गर्मीजन्य खाद्यपदार्थ त होइनन् तर यि खानेकुरामा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइने हुनाले जाडो मौसममा नियमित सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । तिल, बदाम र गुडको नियमित सेवनले छालालाई राम्रो बनाउँछ ।
मानिसहरुले प्रायःजसो जाडो मौसममा पानी कम पिउने गर्दछन् । जसले गर्दा शरिरमा पानीको सन्तुलन बिग्रन गई विभिन्न प्रकारका रोगहरु लाग्ने गर्दछ । जस्तै छालामा सुख्खापन, रक्तचापमा गडबडी, मृगौलामा समस्या, पाचनप्राणालीमा समस्या, आदी । त्यसैले जाडो मौसममा शरिरमा पानीको मात्रा कम हुन नदिनको लागी ख्याल गरेर दिनमा कम्तिमा ८/१० गिलास पानी पिउनु पर्दछ ।